Dowlada Sweden oo kordhineysa Lacagta Kaalmada Guryaha (bostadbidrag) gaar ahaan Waalidka Caruurta Heesta Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaDowlada Sweden oo kordhineysa Lacagta Kaalmada Guryaha (bostadbidrag) gaar ahaan Waalidka Caruurta Heesta
Dowlada Sweden oo kordhineysa Lacagta Kaalmada Guryaha (bostadbidrag) gaar ahaan Waalidka Caruurta Heesta
March 24, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Dowlada Iswiidhan ayaa soo jeedisay in la kordhiyo kaalmada guriyeynta (bostadbidrag) ee loogu talagalay qoysaska carruurta leh boqolkiiba 25 inta u dhexeysa muddada u dhexeysa 1-da Luuliyo ilaa dhammaadka Diseembar 2021. Sida ku cad waxa wasiirka amniga bulshada Ardalan Shakarabi uu maanta ku shaaciyey barta Instagram.
Shakarabi wuxuu sheegay in soo jeedinta kordhinta ku meelgaarka ah looga gol leeyahay in lagu yareeyo saameynta dhibaatada Corona ay ku yeelato qoysaska carruurta.
Dowlada ayaa soo bandhigi doonta biil lagu kordhinayo kororka kumeel gaarka ah ee qoysaska danyarta ah ee haysta caruurta.
Kordhinta waxaa ku jiri doona qoys kasta oo caruur leh oo horeyba u helayey kaalmada guriyeynta . Ka-faa’iideystaha uma baahna inuu soo gudbiyo codsi cusub oo ku saabsan kordhinta, maadaama lagu dari doono kaalmada guriyeynta si otomaatig ah, ugu badnaanna 1,325 kronor bishiiba.
Qiimaha kororka ayaa lagu qiyaasay 560 milyan oo karoon oo dowlada ku bixineyso.
“Qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee haysta carruurta waxay wajahayaan waqti aad u adag,” ayay tiri Wasiirka Guriyeynta Mirta Stenife. Waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay in la kordhiyo taageerada kooxdan maxaa yeelay dhibaatadu way sii socotaa. Sida uu soo xigtay TT.